RASMI: Cristiano Ronaldo oo ku guuleystay abaal-marinta MVP… (Goormee la guddoonsiin doonaa?) – Gool FM
RASMI: Cristiano Ronaldo oo ku guuleystay abaal-marinta MVP… (Goormee la guddoonsiin doonaa?)
(Turin) 31 Jan 2020. Cristiano Ronaldo ayaa ku guuleystay abaal-marinta xiddiga ugu fiicanaa bisha Janaayo horyaal Serie A kaddib markii uu dhaliyey 7 gool 4 kulan oo uu ciyaaray intii lagu guda jiray bishaas.
Ronaldo ayaa sidaas ku hantay abaal-marinta xiddiga ugu qiimaha badan bisha Janaayo horyaalka Serie A ee (The Most Valuable Player for the month of January in Serie A).
Kabtanka xulka qaranka Portugal iyo Kooxda Juventus Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyey todobo gool afar kulan oo uu ciyaaray horyaalka Serie A bishan maanta ku eg ee Janaayo, waxaana goolashaas ku jiray saddexleey uu ugu shubay Cagliari, taasoo ka caawisay Juve inay si fiican ku gaarto kaalinta ug sarreysa horyaalka Talyaaniga.
Cristiano Ronaldo ayaa abaal-marintan lagu guddoonsiin doonaa garoonka Allianz Axadda oo ay taariikhdu tahay 2 bisha Febraayo sanadka 2020, ka hor kulanka ay la wajahayaan Naadiga Fiorentina.
RASMI: Kooxda Arsenal oo maanta la wareegtay xiddig ka tirsan Southampton, xilli Macallin Arteta uu sameeyey saxiixii labaad ee Janaayo
RASMI: Barcelona oo la saxiixatay Francisco Trincao, kaasoo kooxda ku soo biiri doona xagaaga… (Imise Milyan ayay kula soo wareegaysaa?)